थर्मोमिक्स भनेको के हो? | ThermoRecines
El थर्मोमिक्स फूड प्रोसेसर, भोर्वार्कद्वारा निर्मित, वीएम २२०० मोडेलको साथ 70० को दशकमा विकसित भयो। यो रोबोट, जसले विगतका वर्षहरूमा अन्य उपकरणहरू सुधार ग improved्यो, बिस्तारै विकसित भयो र यसको कार्यहरू विस्तार गर्‍यो, विभिन्न मोडेलहरु को माध्यम बाट जाँदै हामी आज सम्म थाहा पाउँनौं संस्करणमा। निश्चित रूपमा VM2200, दुबै तातो र चिसो खानासँग काम गर्न सक्षम, स्पेनमा पहिलो आगमन हो।
Thermomix को छवि
टीएम श्रृंखलाको पहिलो मोडल 3300 80०० थियो र s० को दशकमा रिलीज भयो। यो उपकरण टोकरीलाई धन्यवाद कुचुन बिना पकाउन सक्दछ। यस पछि TM-21 पछ्याईयो, जसले ब्यारोमा जस्ता नयाँ उपकरणहरू समाहित गर्‍यो, भाप पकाउन समेत अनुमति दियो। पछिल्लो, 2004 मा TM31 को जन्म भएको थियो, एक aesthetically नवीकरण संस्करण र केहि नवीनताहरू जस्तै ढक्कन र ब्लेड को नयाँ डिजाइन वा बायाँ मोड। यस मोडेलको साथ, TM31, Thermorecetas.com बाट व्यंजनहरू तयार छन्
यसको १२ कार्यहरू
Thermomix द्वारा सम्पन्न कार्यहरू यति विविध र सटीक छन् कि उनीहरू तपाईंलाई तपाईंको भान्छामा उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ।
काट्नुहोस् र काट्नुहोस्। यो एउटा यस्तो प्रकार्य हो जुन सब भन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ, किनकि यसले सबै प्रकारका खाना काट्न, नर्म वा कडा भए पनि, र ठूलो मात्रामा पनि।
क्रश यस प्रकार्यको साथ, हामी मोटो बनावटको प्युरीबाट एक धेरै राम्रो क्रीममा प्राप्त गर्न सक्छौं जुन चिनियाँमा पार हुन आवश्यक छैन।
पीस र स्पस्ट पार्नुहोस्। मेसिनको शक्ति र यसको प्रतिरोधी ब्लेडको लागि धन्यवाद, चिनी, रोटी, कफी, नट, फलफूल, अन्नफल, चकलेट, मसला, सुगन्धित जडिबुटीहरू, इत्यादि जस्ता केही सेकेन्डमा पाउडरमा कम हुनेछ। यसले हामीलाई आफ्नै मौसममा वा फ्लोरहरू वा ब्याटर्सहरू बनाउन अनुमति दिनेछ। जो खाना असहिष्णुता वा एलर्जीबाट पीडितहरूका लागि ठूलो बचत हो, किनकि तिनीहरूले आफ्नै विशेष खाना तयार गर्न सक्छन्।
टर्बो यो उपयुक्त प्रकार्य हो यदि हामी धेरै कडा अवयवहरू काट्न गइरहेका छौं जस्तै ह्याम टिप्स, ठीक पनीर वा केही सेकेन्डमा बरफ।
समय र गति को एक उदाहरण
चिनी 30 सेकेन्ड 10
कच्चा मासु 10 सेकेन्ड प्रगतिशील गति - - १०
प्याज4सेकेन्ड 5
चकलेट 12 सेकेन्ड 8
आटा (छोला, गहुँ, चामल, सोयाबाट ...) 1 मिनेट प्रगतिशील गति - - १०
बरफ 10 सेकेन्ड 5
पान 10 सेकेन्ड प्रगतिशील गति - - १०
प्याटास2सेकेन्ड 4
अजमोद5सेकेन्ड 7
खुर्सानी वा गाजर3सेकेन्ड 5
सफ्ट चीज (Emmental प्रकार)5सेकेन्ड 5
हार्ड चीज (परमेसन प्रकार) 10 सेकेन्ड प्रगतिशील गति - - १०
सेरानो हेम टाकोस कप र tur टर्बो स्ट्रोक बन्द छ
हल्लाउनुहोस्। हामी उत्तम बनावट र समाप्ति प्राप्त गर्न विभिन्न सामग्रीहरू मिक्स गर्न सक्दछौं। हामी साधारण आमलेट वा स्वादिष्ट पेस्ट्रीहरू र केकहरूको लागि अण्डाहरूलाई हराउन सक्छौं। थप रूपमा, तपाई तरल पदार्थहरू पनि मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ र रिच स्मूडीज, ककटेल वा सूपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि बिभिन्न बनावटहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने इष्टतम परिणामहरू प्राप्त गर्न उत्तम भनेको ठोस सामग्रीहरू काट्नु वा पीस गर्नु हो। त्यसोभए तपाईंले तरल पदार्थहरू थप गर्नुपर्नेछ र समय र गतिलाई हराउनु पर्दछ व्यञ्जन विधिमा।
Emulsify। परम्परागत तरिकामा प्रदर्शन गर्न यो एक सबैभन्दा गाह्रो काम हो र जुन हाम्रो Thermomix सजिलैसँग गर्न सक्छ। यो दुई तरल पदार्थलाई जोड्ने वा मिलाउने बारेमा हो जुन सिद्धान्तमा, मिल्ने हुँदैन, जस्तै तेल र भिनेगर। यस प्रकार्यलाई धन्यवाद छ हामी एक सच्चे शेफको विशेषज्ञताका साथ सॉस, विनागरेट्स वा मलमल बनाउन सक्छौं।
माउन्ट। हाम्रो तयारीमा हावालाई समाहित गर्दा र उनीहरूलाई क्रीमी बनावटको साथ अधिक मात्रा प्रदान गर्दा धेरै उपयोगी हुन्छ। हामी क्रीम, अण्डा, सेतो, योक, दूध, क्रीम चीज, आदि माउन्ट गर्नेछौं।
घुँडा स्पाइक प्रकार्यको लागि धन्यवाद, थर्मोमिक्सले हामीलाई रोटी, पिज्जा, केक, केक, कुकीज, कुकीज, इम्पानेडास र अधिकका लागि उत्तम आटा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। अन्तरालमा यसको अपरेशन को लागी धन्यवाद, यसले एकसाथ सामग्री मिसाउन र पेशेवर मा kne्ग मिलाउन प्रबन्ध गर्दछ।
गिलास मा कुक। गिलासको ठूलो क्षमता, यसको आठ खाना पकाउने तापमान र ११ वेगले हामीलाई सबैभन्दा क्लासिक र परम्परागत तयारीबाट सबै अभान्त-गार्डे गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले भर्खरै पकाउने विधि छान्नुपर्नेछ र समय, तापमान र गति सेट गर्नुपर्नेछ। बाँकी पहिले नै थर्मोमिक्सले हेरचाह गर्यो जुन तपाईको टेक्नोलोजीको लागि धन्यवाद, स्थिर तापमान र आन्दोलन प्राप्त गर्दछ ताकि हाम्रो व्यंजनहरू परिपूर्ण छन्। क्रीम, स्ट्युज, फलफूल, चामल वा डेसर्टहरू शानदार छन्, अन्य भाँडा दाग बिना र कुनै प्रयास बिना। जब प्रक्रिया समाप्त हुन्छ, यसले हामीलाई ध्वनिक स signal्केतको साथ चेतावनी दिन्छ। यस तरिकाले हामी लगातार उत्पादन प्रक्रिया निगरानी गर्न छैन। यो चम्मच गति को उपयोग गर्न को लागी प्रयोग गर्नु धेरै व्यावहारिक छ, जसरी हजुरआमाहरू आफ्ना काठको चम्चाले गर्दछ।
टोकरीमा पकाउनुहोस्। यो एक्सेसरीले हामीलाई सामग्रीहरू पकाउन अनुमति दिन्छ जुन हामी उनीहरूको मौलिक उपस्थितिमा राख्न चाहन्छौं, जस्तै चामल, क्लाम, ब्रोकोली, इत्यादि। वा नाजुक जस्तै माछा, तरकारी र अण्डाहरू। यसले कडा अवयवहरू जस्तै हड्डीहरूलाई पनि ब्लेड रोक्नबाट बचाउँछ। टोकरीलाई आरामदायी तरिकाले हटाउनको लागि हामी स्प्याटुलाको निशान फिट गर्नेछौं र हामी यसलाई माथि उठाउनको लागि हल्का हिसाब गर्नेछौं। यो एक strainer को रूप मा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
भेरोमा कन्टेनरको साथ स्टीम कुकिंग। यस कन्टेनरले हामीलाई बिभिन्न खाद्य पदार्थ दुई हाइटमा राख्न अनुमति दिन्छ। यस तरिकाले हामी तयारी गर्न सक्दछौं, उदाहरणका लागि, शंख वा माछा र, एकै समयमा, गार्निशको लागि केहि तरकारीहरू।
तितली धेरै उपयोगी खाना पकाउँदा खानाको ठूलो मात्रामा हलचल गर्न, जस्तै -4--6 व्यक्तिको लागि डिश। यो क्राइम वा गोरा र इमल्सिफाइ। को कोर्राका लागि कुञ्जी सहायक पनि हो।
स्प्याटुला। यसको साथ, हामी खानालाई मैन्युअल्ली हटाउन र सामग्री हटाउन, साथै भ्याएसपको भित्ताहरू स्क्र्याप गर्न सक्दछौं। यो एक स्टप छ कि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछ जब मेशिन चलिरहेको ब्ल्याडमा पुग्न जोखिमबिना चालु छ र यसरी मेशिनलाई ठूलो मात्रामा आइसक्रीम वा स्लशिजको उत्पादनमा मद्दत गर्दछ।
बेकर मापनको एकाई हुनुका साथै यसले गिलासलाई कभर गर्न अनुमति दिन्छ ताकि त्यहाँ कुनै स्प्लासिing हुँदैन र स्टीमको एस्क्रिप कम हुन्छ। थप रूपमा, यसले एक धेरै नियन्त्रित ढंगले जारमा सामग्रीहरू समावेश गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै मेयोनिज तयार गर्नको लागि तेल।
शेष हामी गिलास भित्र विभिन्न सामग्री तौल गर्न सक्छन्। तपाइँ केवल सावधान हुनु पर्दछ कि मेसिन सफा सतहमा छ, केबल टाउट छैन र त्यो, एक पटक स्केल बटन थिचेपछि, मेशिनलाई यसलाई हटाउनबाट बच्नको लागि सार्न हुन्न। यदि धेरै सामग्रीहरू तौल गर्न सकिन्छ भने, मापन बटन प्रत्येक पटक एक नयाँ जोड्न वा तौल गर्न थिच्नु पर्छ।
थर्मोमिक्सको बारेमा भिडियो
यदि तपाईं थर्मोमिक्सको बारेमा थप विवरणहरू यहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौं पूर्ण भिडियो.
Thermomix वा MyCook?
किचन मेसिन छनौट गर्दा सबैले सोध्ने प्रश्नहरू मध्ये एक हो ¿म किचन रोबोट किन खरीद्छु?। सामान्यतया विकल्पहरू दुई हुन्: Thermomix वा MyCook। यदि तपाईं प्रत्येक उपकरणको सबै पक्ष र विपक्ष जान्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं सेक्सन प्रविष्ट गर्नुहोस् Thermomix बनाम MyCook.